जतिसुकै बिजी भए पनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ! तपाईंको सोंच मा परिवर्तन आउनेछ – Khabar PatrikaNp
January 13, 2021 1550
जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो , तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु . काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु\_ आज कोही रिसाएको छ, उ रि:साएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevबेलायतमा थप एक भूतपूर्व गोर्खा सै’निकको मृ’त्यु
Nextविदेश जान चाहनुहुन्छ? आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, साथै यस्ता सुविधाहरु सहित…
चिया खानेलाई रक्सीको बिलः तिर्न अस्वीकार गरे पछि युवतीले यसरी कु,टे ग्राहकलाई (भिडियो सहित )
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!!
‘के गर्नु त हजुर ? काम गर्न नसकेपछि छोरा, श्रीमतीको हेलत्व भइँदो रहेछ .. लाचार भइयो’ चन्द्रबहादुरले खुइय्य सास फेरे ।
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33676)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33346)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27310)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25162)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22517)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (21902)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20106)